Sida aad u heli A System Free POS From Harbortouch | Awards Web Golden
Sida aad u heli A System Free POS From Harbortouch
by Darin Carter | Jun 13, 2018 | blog | 0 comments
The POS (Point of Sale) System waa mid ka mid ah qaybta ugu muhiim ee tafaariiqda iyo makhaayadda ganacsiga, maalmahan. Lahaanshaha nidaam POS kartoo adiga kuu gaar ah in ka badan diiwaanka lacagta kaa caawinaysaa in aad si aad u hesho oo dhan wararka iibka faahfaahsan. Sayidka, waa weyn oo loogu talagalay shaqaalaha dukaanka iyo sidoo kale Xisaabiyeyaasha. software POS Tani waxay kaa caawinaysaa in aad si ay u falanqeeyaan dhammaan faahfaahinta sida item iibin, dalabyada iyo horumarka on shey kasta, markii ay sale iyo magaca shaqaalaha dukaanka aad. Waxay bixisaa sax ah oo halkan ma jiraan fursadaha qaladaad. Waxaad ka heli kartaa Harbortouch nidaam POS lacag la'aan ah retails, qurxiyo, makhaayadaha iyo baararka iyo sidoo kale ama ganacsiga yar yar.
Maxaa Harbortouch ma Bixi?
Harbortouch siinaysaa xal nidaamka POS dhameystiran. Waxaa ka mid ah hardware POS, software POS iyo sidoo kale adeegyada baayacmushtariga isku dhafan oo waa qumman yahay, waayo, wax kasta oo ganacsiga yar yar, dukaamada tafaariiqda, qurxiyo iyo maqaayado ama makhaayad. Ma aha in aad si saacadood ku qaataan on cilmi baarista ku saabsan waxa aad u baahan tahay ganacsigaaga. Harbortouch laydin weyddiiyo oo qaar ka mid ah su'aalaha aasaasiga ah iyo in aad ka jawaabto in. Markaasuu, oo waxay ogaan doonaan nooca nidaamka aad dhab ahaantii u baahan tahay ganacsigaaga ama dukaanka. Iyada oo ah khidmadaha ugu yar oo aad ka heli kartaa adeegga weyn oo iyaga ka.
Harbortouch bixiyaa nidaam POS gaar ah aad u baahan tahay ganacsi oo kala duwan. Waxaad dooran kartaa ugu fiican ee ku salaysan nooca ganacsiga aad leedahay. Mid kasta oo ka mid ah nidaamka POS uu leeyahay muuqaalada kala duwan in lagu daboolo baahiyaha kala duwan iyo shuruudaha ganacsiga in si gaar ah. Sidaas, riix et ah Bilaabo waayo doorasho Free 'iyo qaar ka mid ah ka jawaabto su'aalaha ay ku weydiin. Halkan waxay ku weydiin doonaa inaad ku saabsan nooca ganacsiga aad leedahay sida dhar ama kabo, hotel ama makhaayad, salon ama dukaanka raashinka iwm. Marka aad dhamaysato jawaabaya su'aalaha oo dhan, waxay u gudbin doonaa codsigaaga Mudanayaasha free.
Sidee Si aad u hesho System Free POS?
Waa wax fudud si aad u hesho nidaamka POS lacag la'aan ah dukaamada tafaariiqda aad iyo maqaayado ka Harbortouch. Waxaad leedahay in la raaco talaabooyin fudud oo sahlan si aad u hesho. Kuwani waa:
Contact Harbortouch: Waa inaad marka hore la xiriir Harbortouch si loo helo nidaam POS for free. Waayo, in, aad leedahay si aad u codsato dhibic xorta ah ee sale dalab. Hel Ansixinta: Marka aad codsatay dhibic free of nidaamka sale, aad leedahay si aad sugaya ansixinta. Marka aad ansixiyay software xorta ah iyo hardware, aad ku fiican tahay in ay tagaan. Waxaa laga yaabaa inaad bixiso lacag bile ah oo daboolaysa taageero iyo services.Free Rakibaadda ah: Waxaad heli doontaa rakibidda si xor ah uga Harbortouch ku Elite by farsamo ay shahaado. All farsamo ay si fiican u tababaran iyo shahaado. Sidaa awgeed, waxaad ka heli doontaa adeeg weyn oo aan xuduud lahayn.
Oo ay la socdaan in aad sidoo kale ka heli doonaa damaanad noolaa on hardware ah. Ma jiraan wax kharash kale ku wehlin doona. Waxaad heli doontaa rakibidda ayaad jeceshahay free, barnaamijyada menu free iyo sidoo kale agabka warqad free. Marka aad u rakiban, waxaad ka heli doontaa taageerada ugu wanaagsan ee ka ulahoodii.
Maxaad Si Dooro Tani?
Doorashada dhibic free of nidaamka sale by Harbortouch kaa caawin doonaa siyaabo badan. Ma aha in aad ku qaataan saacadood cilmi baarista ee adeegyada ugu fiican bixinta software POS iyo hardware. Harbortouch aad bixisaa ugu fiican Point fasalka nidaamka Sale waayo dukaamada tafaariiqda aad, maqaayado, salon iyo halkay, ganacsiyada yaryar iyo qaxwada. Waa adeeg ugu kaaftoomi-free in aad waligaa heli kartaa. Waxaa laga yaabaa inaad codsato barnaamijka online. ka dibna waxaad ka heli doontaa qalabka POS ay la socdaan rakibo xor ah oo aan kharash ku wehlin doona. Xitaa adeegga bisha iyo lacagta taageerada aad u yeelan doonaan in ay bixiyaan waa mid aad u yar. Tani waxay lacagta ugu yar waxay dabooli doontaa dhammaan adeegyada lagama maarmaanka ah.
Haddii aad leedahay ganacsi iyo raadinayso habka ugu wanaagsan oo ugu waxtarka badan POS, markaas Harbortouch ku siin karaan in. Waxaad ka dalban kartaa habka POS xorta ah ku bixiyeen iyaga by. Waxaa ka mid ah software lacag la'aan ah iyo hardware ku salaysan ganacsigaaga. Waxa kale oo la Timaadda oo dhan qaababka lagama baahan yahay socda ganacsigaaga iyo falanqeynta iibka aad habsami. Sidaas, this badbaadiyay waqti badan oo aad u qiimo badan iyo sidoo kale lacag. Harbortouch qaadan kartaa daryeelka dhammaan baahida nidaam POS iyo shuruudaha si hufan.
Saarah Child e-Suuq 16 Jan 2019
Barnaamijka-Ace Official Website 15 Jan 2019
The Great FFA Cutubka Website 11 Jan 2019
Winners ee la soo dhaafay Select Month January 2019 December 2018 August 2018 July 2018 June 2018 Laga yaabaa 2018 April 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 Laga yaabaa 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 Laga yaabaa 2016 April 2016 February 2016 January 2016 October 2015 March 2015 February 2015 January 2015 December 2014 November 2014 September 2014 June 2014 April 2014 March 2014 February 2014 January 2014 December 2013 November 2013 October 2013 September 2013 August 2013 July 2013 June 2013 Laga yaabaa 2013 April 2013 March 2013 February 2013 January 2013 December 2012 November 2012 October 2012 September 2012 August 2012 April 2003 December 2002 August 2000 July 2000